के कारणले आउँछ सेतो दुबी ? यसरी गर्न सकिन्छ घरेलु उपचार - HelloKhabar
के कारणले आउँछ सेतो दुबी ? यसरी गर्न सकिन्छ घरेलु उपचार
काठमाडौँ । दूबी सरूवा रोग हो र यसलाई पनि एक किसिमको कुष्ठरोग ठानिन्छ । कटाणुले हुने रोगमध्ये छाती तथा पिठ्यूँमा हूने हल्का सेतो चक्कालाई दाद, दूबी भनिन्छ । यो सरूवा रोग हो । हेर्दा दाद, दुबी र सेतो दूबी उस्तै–उस्तै देखिन्छन् । तर, दुवै रोग फरक हुन् ।
तसर्थ यसका लागि विदेश गइराख्नु पर्दैन । यस्तो विशेष शल्यक्रियाद्वारा औषधिले निको नभएको दुबीमध्ये ९५ प्रतिशतमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । औषधि वा अपरेसनले दुबीको कारण हटाउन सम्भव हँुदैन । तर सेतो दुबीमा सामान्य रंग मात्र ल्याउन सकिन्छ ।